Semalt विशेषज्ञ: IoT र रेपर Botnets र जोखिम तिनीहरूलाई संग सम्बन्धित
रेपर बोटनेटहरू तल ल्याउन र लक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ केही अनलाइन सेवाहरू, जस्तै DDOS (सेवाहरूको वितरित अस्वीकार)। उनीहरूले स्प्याम अभियानको ठूलो संख्या पनि पुर्‍याउँछन्। किनभने प्रयोगकर्ताहरूले विचार पाउँदैनन् यदि रेपर बोटनेटले उनीहरूको कम्प्युटरमा संक्रमित गर्दछ भने स्प्यामरलाई तपाईंको व्यक्तिगत डाटा चोर्न सजिलो छ जुन पहिचान चोरी घोटालाहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ।
निक चाइकोभस्की , Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, व्याख्या गर्दछ कि सबैभन्दा खराब कुरा भनेको साइबर अपराधियोंले botnets बनाउँदछ र तिनीहरूलाई अनलाइन बोलीदातालाई बेच्छ। त्यसपछि तिनीहरू विश्वभरि केहि साइबर अपराधहरूका लागि बोटनेटहरू प्रयोग गर्छन्। IoT botnets सम्झौता गरिएको उपकरणहरूको संग्रह हो, राउटरहरू, डीभीआर, क्यामेरा, पहिरनयोग्य उपकरणहरू र धेरै इम्बेडेड टेक्नोलोजीहरू सहित। यो मुख्यतया भाइरसले संक्रमित छ र आक्रमणकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अफलाइन र अनलाइन दुवै फरक कार्यहरू गर्न मद्दत गर्दछ। सबै IoT उपकरणहरू सुरक्षा सुरक्षा विकल्प र विशेषताहरू जस्तै पूर्वानुमान योग्यता, सम्झौता व्यवस्थापक लगइनहरू र रिमोट एक्सेसको लागि साझा पोर्टहरू छन्। ह्याकरहरूले मुख्यतया जबरजस्ती बल लगइनहरू मार्फत उपकरणहरू सम्झौता गर्दछन् र खुला पोर्टहरू वा कमजोर सेवाहरूको माध्यमबाट बिभिन्न मालवेयर ईन्जेक्शन गर्छन्।
कसरी तपाइँको पीसी IoT वा reaper botnets को एक हिस्सा हो भने कसरी पत्ता लगाउने
यो पत्ता लगाउन सजिलो छ कि यदि तपाइँको कम्प्यूटर बोटनेटको एक अंश हो र तपाइँ तपाइँको उपकरणको प्रदर्शनमा यसको प्रभावको मूल्याate्कन गर्न सक्नुहुन्छ। जब एक कम्प्यूटर बोटनेट भाग हुन्छ, यसले बिस्तारै कार्य गर्दछ र तपाइँको निर्देशन अनुसार कार्य गर्दैन। यसका साथै वेबसाइटहरू राम्ररी लोड हुँदैनन्, र तपाईंको अपरेटिंग सिस्टमहरू धेरै प्रश्नहरूको साथ ओभरलोड गरिएका छन्।
कसरी यी botnets काम गर्दछ?
रिपर बोटनेट्स र आईओटीलाई केहि कार्यहरू गर्न निर्देशन दिइन्छ। तिनीहरू मुख्य रूपमा व्यक्तिगत जानकारी चोर्नका लागि जिम्मेवार छन् जस्तै क्रेडिट कार्ड विवरणहरू र उनीहरूको शान्त व्यवहारको कारण प्रयोगकर्ताहरूलाई नहुन सक्छ। ह्याकरहरू जुन बोटमास्टरहरू भनेर चिनिन्छन् उनीहरू मुख्य रूपमा यी बोटनेटहरू प्रयोग गर्छन्। कमाण्ड र कन्ट्रोल सर्भरहरू बोटनेटहरू तल ल्याउने हो।
निम्न जोखिमहरू यी बोटनेटहरूसँग सम्बन्धित छ।
१. उनीहरू वैध हुने बहाना गर्दछन् र तपाईंलाई शicious्कास्पद गतिविधिहरूमा संलग्न गराउँदछन्:
बोटनेटससँग सम्बन्धित जोखिमहरू ईन्टरनेटमा मालिसियस प्रोग्रामहरू र शicious्कास्पद गतिविधिहरूको जोखिम जस्तै हुन्। उदाहरण को लागी, botnets तपाइँको व्यक्तिगत जानकारी चोर्न र तपाइँको क्रेडिट कार्ड विवरण को लागी डिजाइन गरीएको छ। तिनिहरु तपाईको बौद्धिक सम्पत्ती, ब्लुप्रिन्ट, र पासवर्डहरु मा पनि पहुँच प्राप्त गर्दछ र कहिलेकाँही सम्बद्ध वेबसाइटहरु को लिंक मा क्लिक गर्न तपाईलाई बाध्य पार्छ। तपाईंले बुझ्नु पर्दछ कि तपाईंको कम्प्यूटर एक पटक संक्रमित भयो भने, यसले तपाईंको आवश्यकताहरूको रूपमा कार्य गर्दैन तर हैकरले तोकेको कार्यहरू गर्दछ।
२. व्यक्तिगत र कर्पोरेट कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरू बीच कुनै रेखा छैन:
कर्पोरेट र व्यक्तिगत कम्प्युटर बीचको रेखा धुमिलो छ। हामी सबै बोटनेट मालवेयरको शिकार हुन सक्छौं, र तिनीहरूबाट छुटकाराको एक मात्र तरीका भनेको एन्टि-मालवेयर प्रोग्राम स्थापना गर्नु हो। Botnet मालवेयर को पहिचान र रोक्नु भनेको तपाईको सुरक्षा अनलाइन सुनिश्चित गर्नु पर्छ। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, बोटनेटहरू एन्टि-मालवेयर वा एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरूमार्फत रोक्न सकिन्छ। हामी नेटवर्क ट्राफिकमा संक्रमणहरू रोक्न सक्छौं र चाँडै नै तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छौं।